🥇 ▷ Koei Tecmo Europe wuxuu ku dhawaaqay jaceylka saddexda boqortooyo XIV ee PS4 iyo PC ✅
Koei Tecmo Europe wuxuu ku dhawaaqay jaceylka saddexda boqortooyo XIV ee PS4 iyo PC
KOOXDA AY GUURSANAYSAA FARSAMADA FURSADAHA EE PLAYSTATION®4 iyo PC
Ciyaarta cusub ee istiraatiijiyadeed ayaa lagu dhexqabtay dhaqanka Shiinaha si dib loogu qori karo taariikhda saddexdii Boqortooyo
KOEI TECMO Yurub wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo soo noqoshada mid ka mid ah magacyadoodii ugu caansanaa, tan iyo ciyaar istiraatiijiyad taariikhi ah Jacaylka Saddexda Boqortooyo XIV Waxay hadda ku socotaa horumarinta barnaamijka madaddaalada ee PlayStation®4 iyo qaab digital ah oo loogu talagalay Windows PC iyada oo loo sii marayo Steam®.
Munaasabadda lagu dhawaaqay, Koei Tecmo Wuxuu u qaybiyey laba fiidiyow oo muuqaal ah oo ciyaarta ah oo uu ku arki karo xiriiriyeyaasha soo socda:
Trailer hoos u bixinta:
Hal-ku-dhiggii u dambeeyay ee taxanaha taatikada taariikhiiga ah ayaa sidoo kale lagu dejiyey dayrta Han Dynasty qadiimiga ah Shiinaha; halkaas oo dagaalada ka dhacaan halgan aan xadidneyn oo dhul. Khariidadda ciyaarta ayaa muujineysa dhulka la qabsaday iyo farxadda fidinta iyadoo la adeegsanayo si fudud nidaamka midabka, kaas oo bixiya cashuur si asalka ah Jacaylka Saddexda Boqortooyo, oo lagu soo saaray qaab kumbuyuutar PC ah 1985. Wax kasta, min dagaal ilaa arrimaha diblomaasiyadeed, waxay ku xirnaan doonaan maareynta iyo aruurinta, halka ciyaartoydu ay isku dayaan inay ku faafiyaan istiraatiijiyadooda marka loo eego khariidadda ballaaran ee Shiinaha.
Dheeraad ah, RTK14 waxay qaadan doontaa nidaamka taliyayaasha RTK9 Y RTK11 in la caawiyo ku soo celi qaab ciyaareedkii caadiga ahaa ciyaarta. Tani waxay muujineysaa in ficilada oo dhan, laga bilaabo gudaha, siyaasadeed iyo dagaalka, ay hadda ka dhici doonaan khariidad keli ah. Waxaa sidoo kale jiri doona shakhsiyad weyn oo ka dhexdhaca jilayaasha, oo leh saraakiil ka socda saddexda boqortooyo sida Liu Bei iyo Guan Yu, iyaga oo ku andacoonaya xaalado kala duwan inay gebi ahaanba ku dhaartaan ciyaartoy taariikhda qani ku ah ciyaarta. Laakiin taasi maahan, nidaamka cusub ee Sirdoonka Artifalka Waxaa loo hirgaliyay in lagu tartamo ciyaartoy joogta kulamada joogtada ah. Iyada oo ururada hadda lagu qeexay ujeedooyinka taliye kasta, khibradaha ciyaaraha ee kala duwan ayaa hadda suurtogal ah iyada oo loo marayo taliyayaal kala duwan. Xitaa isla kooxda gudaheeda, siyaasado kaladuwan ayaa hada keenaya istaraatiijiyooyin kala duwan oo loogu talagalay fidinta, taasoo si macquul ah u adeegsaneysa dhowr sarkaal oo ah rukunka aasaasiga ciyaarta ciyaarta.
Jacaylka Saddexda Boqortooyo XIV Waxaa lagu sii deyn doonaa galbeedka bilowga 2020.
Wixii macluumaad dheeraad ah http://www.facebook.com/koeitecmogames